ढिलै भएपनि नेपाल–चीन सम्बन्धको नयाँ युग आरम्भ भएको हो त ? - Himalayan Kangaroo
ढिलै भएपनि नेपाल–चीन सम्बन्धको नयाँ युग आरम्भ भएको हो त ?
Posted by Himalayan Kangaroo | ९ चैत्र २०७२, मंगलवार १६:४४ |
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा भएको सहमति र समझदारीले नेपालको आर्थिक समृद्धिको लागि महत्वपूर्ण सहयोग गर्ने देखिन्छ । तर पनि चीनको प्रतिवद्धताका वावजुत नेपालले कार्यान्वयनमा अग्रसरता देखाउन नसक्दा विगतमा यथोचित फाईदा लिन नसकेको चाहिँ साँचो हो । विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्र चीनवाट यथोचित फाईदा लिनको लागि नेपाल स्पष्ट खाकासहित अगाडी बढ्नु पर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । पत्रकार बुद्धि शर्मा लेख्छन् :
विगतका सरकारहरुले कूटनीतिक तहवाट आँट्न नसकेका केही मुद्दामा प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसंग समझदारी गरेका छन् । बेईजिङ्गमा ओलीले आफु विशेष उद्धेश्यले चीन आएको बताएपछि चिनिया पक्ष नेपालप्रति ज्यादा उदार तथा सकारात्मक देखिएको बताईएको छ । चीनको चर्चित पत्रिका ग्लोवल टाईम्सले नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले ठूलो आँटका साथ चीनसंग साझेदारी खोजेका उल्लेख गर्दै विकासका मुद्दामा ओली गम्भिर देखिएको लेखेको छ ।
चीनसंग नेपालले गरेका विभिन्न समझदारीमा निश्चितरुपमा पारवहनको मुद्दाले बढ्ता चर्चा पाएको छ । चीनको बन्दरगाह नेपालले प्रयोग गर्न विभिन्न प्राविधिक कठिनाईहरु भएपनि नेपालको हितका लागि कठिनाईहरु हटाउन मिलेर पहल गर्ने चीनको आश्वासनले पनि नेपालीको मन जितेको पक्कै हो । झनै नेपाललाई अप्ठ्यारो पर्दा पारवहन र इन्धनलाई हतियारको रुपमा प्रयोग गरेर अनावश्यक दुखः दिने भारतको विकल्प चाहेका छन् नेपालीले यतिखेर । ढिलै भएपनि चीनसंगको समझदारीले नया युग आरम्भ भएको जानकारहरुको भनाई छ ।
जनवादी चीनको औपचारिक भ्रमण गर्ने पहिलो नेपाली प्रधानमन्त्री थिए टंकप्रसाद आर्चाय । सन् १९५६ मा भएको उनको चीन भ्रमणका क्रममा पुराना सन्धिहरु खारेज गरिएको थियो । त्यस्तै गरी सन् १९६० मा नेपालका पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विपी कोईरालाको चीन भ्रमणका क्रममा शान्ति तथा मैत्री सन्धि सम्पन्न हुनुका साथै दुवै देश एक अर्का देशमा दूतावास स्थापना गर्न सहमत भएका थिए । कोईरालाकै चीन भ्रमणका क्रममा चिनिया राष्ट्रपति माओशेत्तुङ्गले नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको सम्मान र रक्षाको लागि चीन सदा सहयोगी भएको भरोशा दिलाएका थिए ।
त्यस्तै गरी सन् १९६१मा राजा महेन्द्रको चीन भ्रमणका क्रममा पनि महत्वपूर्ण समझदारी भएका थिए ।
नेपालले चीनसंगको सम्वन्धबाट फाईदा लिन नसकेको कतै लुकेको छैन् । झनै यस पटक त चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपीङ्गले नेपाल र चीन साझा भाग्य निर्माणमा तल्लिन हुनु पर्ने वताएर नेपालीको मन जितेका छन । नेपालका कुनै पनि एजेन्डा र आवश्यकतामा चीन सदा उदार रहेको चिनिया राष्ट्रपतिले बताएका छन् ।
चीनसंग यसपटक भएका महत्वपूर्ण सहमति र समझदारी बस्तुतः नेपालकै हितमा भएकोले व्यावहारिकरुपमा त्यसवाट फाईदा लिन नेपालले नै ढिलो नगरी कदम चाल्नु पर्ने जानकारहरुको सुझाव छ ।
Previousभलिबलमा राजकुमार ह्यारीको टिम विजयी
Nextविषाक्त रक्सी खाँदा २४ जनाको ज्यान गयो
१० भाद्र २०७६, मंगलवार ११:१८